Izindaba - Gubha ngokufudumele iphrojekthi ye-DTS Nestlé Turkey iphase ngempumelelo ukuhlolwa kwe-Temperature Distribution Nestlé
Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd., njengoba umholi ukudla yasekhaya isiphuzo inzalo umkhakha, uye wenza inqubekela phambili okuqhubekayo kanye emisha endleleni eya phambili, futhi unqobile ukuqashelwa ngazwi linye nokwethenjwa amakhasimende ekhaya aphesheya.
Kuyafaneleka ukubalula kumaphrojekthi amaningi ukuthi kulo nyaka i-DTS iwine iphrojekthi yokulungela ukuphuza yekhofi yeNestlé Turkey OEM inkampani, inikezela ngesethi ephelele yemishini yokuphalaza inzalo yokujikeleza amanzi, nokuma ngomshini wokugcwalisa we-GEA e-Italy Krones eJalimane.Ngalesi sikhathi, kusuka ekukhiqizeni nasekuqhubekeni, kuye ku-FAT, ukufakwa nokuthunyelwa ngasikhathi sinye; "babe namandla akholisayo", izidingo eziqinile zethimba le-DTS zekhwalithi yemishini, izixazululo eziqinile nezicophelelayo zobuchwepheshe, iwine ikhasimende lokugcina, i-United States Ukunconywa kochwepheshe bakwaNestlé nabasebenzi bezitifiketi abavela eSouth America. Ngemuva kwezinsuku ezingaphezu kweshumi zokubambisana Ukubambisana, ukusatshalaliswa kokushisa kwesitilobho se-DTS esimweni esimile nesijikelezayo kufanelekile ngokuphelele, futhi kudlulise ngempumelelo ukuqinisekiswa okuqinile kukaNestlé.
Kuyini ukuqinisekisa okushisayo? Kungani ukuqinisekiswa kokushisa kushiswa kakhulu ngamakhasimende aphezulu? Yiziphi izinzuzo i-DTS enazo ukuze ufanelekele lo msebenzi?
Ukuqinisekiswa kwe-Thermal, okungukuthi, lapho kwenziwa ukwelashwa kokushisa kumkhiqizo, qinisekisa ukuthi izinga lokushisa kwengxenye ngayinye yemishini yokuvala inzalo iyalingana futhi ayiguquki ngesikhathi senqubo yokushisa okushisayo njalo, bese uqinisekisa ukuthi inqubo yokuvala inzalo ingakufinyelela ukuphepha kokudla, ngalokho iqhakambisa inqubo ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo nokunciphisa isikhathi senqubo. Emkhakheni weziphuzo ezigcwalisiwe, inzalo efanelekile futhi esebenzayo kuphela engabhubhisa noma ibulale ama-enzyme kanye nama-microorganisms esiphuzweni uqobo, futhi iqinisekise ukuthi imikhiqizo ihlangabezana nezidingo zokuvalwa kwezentengiselwano. Ngakho-ke, ukuqinisekiswa okushisayo kungenye yezinto ezibalulekile zokuqinisekisa ukuphepha komkhiqizo, futhi kungezinye zezidingo ezibalulekile ze-US FDA yabakhiqizi bokudla neziphuzo. Kodwa-ke, ayikho indinganiso efanayo yokuhlolwa kokushiswa kwemishini yokufaka inzalo ekhaya nakwamanye amazwe, kepha izidingo zikaNestlé ziqinile kakhulu. Abakhiqizi bemishini kuphela abanekhwalithi enhle kakhulu, ukusebenza okuthembekile kanye nohlelo lomsindo abangafakwa ohlwini lwabo abahlinzeki. Lokhu futhi kuyisisekelo se-DTS ukusinda, ukuthuthuka nokuchuma.
I-DTS ineqembu elisebenza ngobungcweti, elisencane futhi elinamandla, i-high-end, precision, top-notch "imishini yokucubungula, ifuna ushintsho ekuhloleni, lenze okusha kulolo shintsho. Ngikholwa ukuthi i-DTS izoqhubeka iye kude futhi yakhe impilo engcono.